1 Dec 2017 . 10:17 AM
ယခုနှစ်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက်လည်း LG Mobile Division က ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ နှစ်စတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ LG G6 ဖုန်းကလည်း ယခုနှစ်အတွက် Qualcomm က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး Snapdragon 835 Processor ကို အသုံးမပြုနိုင်ခဲ့သလို နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ LG V30 စမတ်ဖုန်းကလည်း Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ iPhone X တွေကြားထဲမှာ မှေးမှိန်သွားခဲ့တယ်ပဲပြောရမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် LG ကုမ္ပဏီကနေ နောက်နှစ်မှာတော့ ယခုလိုမျိုး ရောင်းအားကျတာမျိုး ကြုံတွေ့ရတာမျိုးမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ Mobile အပါအဝင် နည်းပညာနဲ့ Marketing ပိုင်းဆိုင်ရာ ဌာနတွေမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲနေရာတွေအကုန်လုံးကို လူတွေပြောင်းလဲလိုက်တာပါပါ။ ဒါတင်မကသေးပဲ နိုင်ငံရပ်ခြား B2B ရောင်းချမှုတွေအတွက် နောက်ထပ် သီးခြားကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုကိုပါ တည်ထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက LG စမတ်ဖုန်းတွေ စတင်ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းထဲက R&D ဌာနမှာ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ Mr.Hwang Jeong-hwan က LG Mobile Communications ကုမ္ပဏီရဲ့ President နေရာကို ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Chief Technology Officer – CTO နေရာလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီး လက်ရှိ Dr. Skott Ahn ကို LG Corp အနေနဲ့ ရာထူးတိုးသွားတဲ့အတွက် ယခင် LG Software Center ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Dr. Park ll-pyung နဲ့ အစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ Global Marketing Center ရဲ့ ခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိနေတဲ့ Brain Na ကလည်း LG Western Europe ရဲ့ President အဖြစ် ရာထူးတိုးသွားပြီး Global Marketing Center နေရာကို ယခင် Appliance Marketing Communications နေရာမှာရှိနေတဲ့ Han Chang-hee က ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယခင် LG Business Solutions နဲ့ LG India ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Kwon Soon-hwang ကလည်း ယခုအသစ်တည်ထောင်လိုက်တဲ့ LG B2B ကုမ္ပဏီအသစ်ကို ဦးဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Mobile Division ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ LG က နောက်နှစ်မှာတော့ အောင်မြင်လာနိုင်မလားဆိုတာက ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှဈဖွဈတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈအတှကျလညျး LG Mobile Division က ထငျသလောကျ မအောငျမွငျခဲ့ပွနျပါဘူး။ နှဈစတုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ LG G6 ဖုနျးကလညျး ယခုနှဈအတှကျ Qualcomm က ထုတျလုပျထားတဲ့ အကောငျးဆုံး Snapdragon 835 Processor ကို အသုံးမပွုနိုငျခဲ့သလို နှဈလယျပိုငျးမှာ ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ LG V30 စမတျဖုနျးကလညျး Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ iPhone X တှကွေားထဲမှာ မှေးမှိနျသှားခဲ့တယျပဲပွောရမှာပါ။
အဲ့ဒီအတှကျ LG ကုမ်ပဏီကနေ နောကျနှဈမှာတော့ ယခုလိုမြိုး ရောငျးအားကတြာမြိုး ကွုံတှရေ့တာမြိုးမရှိအောငျ ဆောငျရှကျဖို့ အစီအစဉျတဈခုကို ပွုလုပျလိုကျပါတယျ။ အဲ့ဒီအစီအစဉျကတော့ Mobile အပါအဝငျ နညျးပညာနဲ့ Marketing ပိုငျးဆိုငျရာ ဌာနတှမှောရှိတဲ့ အကွီးအကဲနရောတှအေကုနျလုံးကို လူတှပွေောငျးလဲလိုကျတာပါပါ။ ဒါတငျမကသေးပဲ နိုငျငံရပျခွား B2B ရောငျးခမြှုတှအေတှကျ နောကျထပျ သီးခွားကုမ်ပဏီခှဲတဈခုကိုပါ တညျထောငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက LG စမတျဖုနျးတှေ စတငျထုတျလုပျတဲ့အခြိနျတုနျးထဲက R&D ဌာနမှာ အတှအေ့ကွုံရှိခဲ့တဲ့ Mr.Hwang Jeong-hwan က LG Mobile Communications ကုမ်ပဏီရဲ့ President နရောကို ပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Chief Technology Officer – CTO နရောလညျး ပွောငျးလဲသှားပွီး လကျရှိ Dr. Skott Ahn ကို LG Corp အနနေဲ့ ရာထူးတိုးသှားတဲ့အတှကျ ယခငျ LG Software Center ရဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ Dr. Park ll-pyung နဲ့ အစားထိုးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အလားတူ Global Marketing Center ရဲ့ ခေါငျးဆောငျနရောမှာရှိနတေဲ့ Brain Na ကလညျး LG Western Europe ရဲ့ President အဖွဈ ရာထူးတိုးသှားပွီး Global Marketing Center နရောကို ယခငျ Appliance Marketing Communications နရောမှာရှိနတေဲ့ Han Chang-hee က ဝငျရောကျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ယခငျ LG Business Solutions နဲ့ LG India ကို ဦးဆောငျနတေဲ့ Kwon Soon-hwang ကလညျး ယခုအသဈတညျထောငျလိုကျတဲ့ LG B2B ကုမ်ပဏီအသဈကို ဦးဆောငျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Mobile Division ရဲ့ အဓိကကတြဲ့ နရောတှကေို ပွောငျးလဲမှုတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ LG က နောကျနှဈမှာတော့ အောငျမွငျလာနိုငျမလားဆိုတာက ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ပေးစွမ်းခဲ့ပြီး သရေကျခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်ယူ
by phonehayko . 16 hours ago
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် Apple Event မှာ ဘာတွေတွေ့ရနိုင်မလဲ
by Min Than Htike . 20 hours ago
စက်တင်ဘာလအထိ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းတွေ